I-NC Ankai omtsha ukuthatha umgudu ukuze aqalise ubugcisa angaphandle, iingcali ekuvelisweni isiphelo ophezulu-iimveliso kumatshini CNC hamba, ngqongqo kakhulu, ukuzinza elungileyo.
Le nkampani wafumana isethi epheleleyo inkampani Technology South Korea HJM, othini ekhoyo olunye, ulawulo ndzandzelelano axis ezintathu CNC lathe nkqo wekhaya complex iimveliso ezintathu jikelele machine series; nabo babe eliphezulu-grade Umatshini CNC lathe wokugaya esimbaxa yokuluka kabini, asixhenxe axis nedibanisa ezine, kangangoko ubuninzi ukuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi ezahlukeneyo.
NC uthabathe iinzame zokusebenzisa iimveliso: Isiza ngomatshini, elektroniki, unxibelelwano, ishishini IT, zonyango, eyama emkhosini, yentsimbi, ushishino iindawo mechanical kwaye ihydraulic kukuninzi nocoselelo phezulu, processing ezincinane iindawo ezintsonkothileyo, ubuninzi nokubotshwa izinto intonga ububanzi 38mm, unako ukufikelela iiyure ezingama-24 kwemveliso ebumnandini.
Lo matshini yamkela ngesantya esiphezulu inkqubo CNC, ihambile eyakhelwe-ngaphakathi edibanise kwaye eyakhelwe-ngaphakathi resolution zokukhowuda eziphakamileyo, izahlulo isakhiwo, umgangatho ophezulu kunye (iimveliso brand-igama ezifana iibheringi, Screw ibhola, isikhokelo yomgama ukuba kwamanye amazwe) nengqiqo, kwezemveliso ephuhlileyo, ukuhlolwa mveliso ngemilinganiselo angaphandle phambili, ngoko iimveliso zifike ngamazwe phambili inqanaba.
obuchwepheshe obuphezulu, loqalo lwencopho ophezulu, umgangatho ophezulu ukulandela yanaphakade Ankai entsha, Ankai abantu abatsha umoya "umgangatho kuqala, inkonzo kakuhle, umoya kunye neengcinga nguvulindlela, nangokugqibeleleyo abathengi kunye nophuhliso eqhelekileyo.
CNC iimpawu imveliso machine:
1, nokoma aphezulu: umatshini yonke inzima kancinci, nto leyo eziqulethwe ekubunjweni emzimbeni udonga balo babulingana nesandla, bube ngangomolulo kaloliwe sikhokelo, njl le ngqongqo kwaye expansibility zesixhobo umatshini ukuba bomelele, ukusika enzima obuphakamileyo kwezinye izixhobo machine , kwaye zinezibonelelo ezicaceleyo ngentsimbi lokuqhubeka, ingxubevange sentsimbi, steel stainless njalo njalo.
2, uzinzo aphezulu: isikhokelo kunye kweminwe banzi, wagaleleka eziphambili / countershaft emva nezikhokelo isixhobo itshixa, kuphucula Ukuzinza workpiece.
3. Le FANUC - uthotho lateral onamandla isixhobo ngeemoto kwalusa ngeemoto mkhulu oluthi beta.
1) le series alpha yeyona FANUC motor liphezulu, yaye ngqo yayo, ukusebenza kunye nobomi zingcono ngaphezu oluthi beta.
2) akukho Ubhaqo ubushushu motor beta series. I-injini kunye nenkqubo iza yonakele xa amaqondo obushushu motor kwandisa gqolo xa umthwalo eqhubekayo okanye umthwalo omkhulu.
3) shaft eziphambili, servo msindo usebenzisa udibaniso lwe thotho (FANUC, kunye liphezulu) kunye yokuluka, msindo ezinqamlezayo liyacandeka, beta series njengoko yezoqoqosho uhlobo wokukhulisa, ixabiso lingaphantsi thotho alpha, nomphini ephambili, ngombhobho yethu ezinqamlezayo elibaliswayo luhlobo efunekayo, ekugcinweni ezifike ilalela yonke ezithatha indawo yezinye kunye nokulungiswa iindleko kufuneka ibe ngaphezulu kwe thotho beta inkampani yethu zixhotyiswe alpha motor SM205. Le torque motor alpha, elithe ngqo ingxelo, ukusonjululwa zokukhowuda, kwaye ubhaqo ngoku inamandla kakhulu ngaphezu motor beta.
4, isantya esiphezulu nocoselelo aphezulu kunye ukusebenza aphezulu: ngeyona isixhobo ubeko ilawulwa ngesantya esiphezulu ukusebenza arithmetic, ukuze ixesha isixhobo etshintshayo imfutshane kwaye indawo egqibeleleyo ifunyanwa ngexesha elinye, kwaye ixesha abangabancedani lifinyele ku eyona imfutshane.
5, uqwalaselo aphezulu: yeendima kanzulu esebenza, axis multi zizityebi yoqwalaselo isixhobo, kunye nezixhobo standard namandla, nto leyo wothuka kakhulu ububanzi processing kunye wadibana machining entsonkothileyo ungamalungu ezintsonkothileyo.
6, indawo operation ezingafanelekileyo isithuba operation lula, kulula ukutshintsha imela, nkqo isixhobo phantsi Ungafumana nj ilungileyo.
7, bhetyebhetye omkhulu; zinokuphunyezwa kunye okanye ngaphandle isikhokelo bushing interchangeability, izixhobo mandla mayixhotyiswe quick ngomsonto utshintsho ovuthuzayo yokugaya, intloko amandla, VDI mgawuli, chip weplishi, umqokeleli oyile kwenkungu, ivili wire extrusion, impompo nehigh kunye nezinye izixhobo.